Maamulka Jubaland Oo edeyn yaableh U soo jeedisey DF Sheegtayna in ay dabada kariixayso Musharax Cabdulaahi Seraar iyo warar sheegayaa In… - Banaadirsom
Home Arimaha Bulshada Maamulka Jubaland Oo edeyn yaableh U soo jeedisey DF Sheegtayna in ay...
Maamulka Jubaland Oo edeyn yaableh U soo jeedisey DF Sheegtayna in ay dabada kariixayso Musharax Cabdulaahi Seraar iyo warar sheegayaa In…
Kismaayo (Banaadirsom)-Maamulka Jubaland ayaa dowladda federaalka ku eedeeyey inay qal-qal gelineyso ammaanka deegaanada uu maamulkaas ka taliyo, islamarkaana ay ka waddoo faro-gelin.
War-saxaafadeed ka soo baxay Jubbaland ayaa lagu sheegay in dowladda Federaalka ay qaadeyso mas’uuliyadda dhacdadii shalay ee Garoonka diyaaradaha Kismaayo, halkaasi oo afar askari ay ku dhaawacmeen is-rasaaseyn ka dhacday.
Is-rasaaseyntaas ayaa waxay dhex-martay ciidamada ammaanka garoonka iyo Ilaalada Musharax Cabdi Nasir Seeraar, oo ka mid ah musharaxiinta la loolameysa Axmed Madoobe.
“Dowlad goboleedka Jubbaland waxay masuuliyad ka saarantahay sugidda Amniga dalka iyo dadka reer Jubbaland , mana ogolaaneyso waxkasta oo carqalad ku ah kala danbeynta iyo nidaamka dowladnimo, Jubbaland waxay caddeynaysaa inay faragalin gurracan ku hayso hambsami u socodka hanaanka doorasho ee Jubbaland taas oo ay masuuliyadeeda qaadan doonto DFS fal kasta oo liddi ku ah amniga iyo dowladnimada JJubbalan” ayaa lagu yiri War saxaafadeedka.
Dhacdadii shalay ee garoonka Kismaayo ayaa sidoo kale la sheegay inay buuq ka abuurtay shirka dowladda iyo dowlad goboleedyada, kadib markii Axmed Madoobe uu madaxda dowladda ku eedeeyey inay soo direen Seeraar.
Axmed Madoobe ayaa la sheegay inuusan ka qeyb-
galin kulankii ugu dambeeyey ee xalay ka dhacay Garoowe.